Shaxdan Ayuu Valverde Doonayaa In Uu Zinedine Zidane Ugula Tartamo La Liga Ee Kadib Heshiiska Barcelona Ee Antoine Griezmann Iyo Qorsha Neymar Jr. - Gool24.Net
Shaxdan Ayuu Valverde Doonayaa In Uu Zinedine Zidane Ugula Tartamo La Liga Ee Kadib Heshiiska Barcelona Ee Antoine Griezmann Iyo Qorsha Neymar Jr.
July 12, 2019 Mahamoud Batalaale
Kooxda Barcelona ayaa ugu danbayn si rasmi ah ugu dhawaaqday heshiiska Antoine Griezmann kaas oo ay ka soo bixiyeen lacagtii heshiiskiisa Atletico Madrid lagu burburin karayay oo 120 milyan yuro ahayd.
Barcelona ayaa Antoine Griezmann ka saxiixatay heshiis shan xili ciyaareed ah wuxuuna kooxda sii joogi doonaa ilaa 2024 iyada oo si rasmi ah loo shaaciyay in heshiiskiisa lagu burburin karo 800 milyan yuro.
Waxaa ugu danbayn soo dhamaaday hawlgalkii Barcelona ee labada sanadood soo jiitamayay ee ay ku doonayeen saxiixa Antoine Griezmann isaga oo hadda si rasmi ah u noqday ciyaartoy Barcelona ah.
Barcelona waxay wadaa qorshe suuqa kala iibsiga ah oo kooxdeeda heer kale u qaadi kara haddii ay sida ay wax u socdaan ugu guulaysato.
Soo laabashada Neymar Jr ku doonayo in uu Camp Nou ku yimaado ayaa ah hadal haynta ugu badan ee jamaahiirta Barcelona iyo saxaafada caalamka iyada oo hadda uu soo xidhmay albaabkii hadal haynta badnaa ee Antoine Griezmann.
Barcelona waxay hadda ku guulaysatay saxiixa Griezmann waxayna hadda awooda iskugu gayn doontaa sidii ay Neymar Jr u soo ceshan lahayd iyada oo ay kooxdeeda sii joogeen Lionel Messi iyo Luis Suarez waxay ka dhignaan doontaa in ay heli doonaan weerarkii ugu cuslaa ee hal koox ka soo wada muuqda.
In Barcelona ay soo gaba gabaysay heshiiskii Antoine Griezmann waxa uu maamulka Camp Nou siinayaa in ay hadda u gacan banaanaadaan arinta Neymar Jr oo ay PSG si fiican ula fadhiisan karaan.
Shaxda Macquulka Ah Ee Uu Valverde Ku Soo Shirtagi Karo Xili Ciyaareedka Cusub:
Inta badan boosaska shaxda Valverde waa kuwo la sii ogyahay sida ay noqon doonaan laakiin waxay dooda ugu badani ka jirtaa dhinaca weerarka ee haddii la dhamaystiri doonoNeymar Jr wuxuuna haddaba Valverde haystaa Lionel Messi, Luis Suarez iyo Griezmann.
Valverde ayaa difaaciisa dhexe dib ugu soo celin doona Samuel Umtiti kadib xili ciyaareed dhibaato badnaa oo uu soo qaatay wuxuuna la midoobi doonaa Gerard Pique iyada oo Lenglet uu kaydka ku laaban doono.
Jordi Alba iyo Semedo ayaa difaaca boos ka wada heli kara haddii aanu Semedo qayb ka noqon heshiiska Neymar oo ay kooxda PSG xiisanayso halka khadka dhexe ay ku soo wada bixi doonaan Frenkie De Jong, Sergio Busquets iyo Arthur Melo iyada oo Ivan Rakitic uu booskiisa lumin doono.
Valverde ayay ku adkaan kartaa in uu hal mar shaxdiisa boos uga wada helo Luis Suarez Neymar jr, Antoine Griezmann iyo Lionel Messi haddii ay kooxdiisu dhamaystirto saxiixka Neymar.
Laakiin waxaa jira qaab Valverde ka caawinaya in uu dhamaan xidigaha aan soo sheegnay shaxdiisa ugu soo wada bilaabi karo taas oo ah in Messi uu qayb ka noqdo khadka dhexe ee isku xidhka weerarka iyo ciyaartoyda khadka dhexe.
Halkan kaga bogo shaxda Macquulka ah ee Uu Valverde Ku soo shirtagi karo xili Ciyaareedka cusub kadib wararkii suuqa ee ugu danbeeyay.
Haddii ay Barcelona ku guulaysato in ay soo celiso Neymar Jr waxay kooxdeeda ku heli doontaa afar gool dhaliye oo tayo sare leh iyada oo Valverde uu doorashooyin badan heli doono taas oo ka caawin karta in ay xili ciyaareedkii saddexaad oo xidhiidh ah difaacan karaan koobka La Liga.
Laakiin ujeedada ugu wayn ee ay Barcelona xili ciyaareedka cusub ka leedahay ayaa ah in ay iska reebto ceebtii laba sano jirsatay ee ay kooxaha Roma iyo Liverpool kagala kulmeen Champions league.